Si toos ah u gal Twitch | Madasha Mobile -ka
Eder Ferreno | 24/09/2021 18:00 | Barnaamijyada
Twitch wuxuu noqday mid ka mid ah aaladaha ugu caansan adduunka oo dhan oo ka mid ah taageerayaasha ciyaaraha internetka. Waxaa suurtogal ah in dad badani ka helaan marinnada kale, laakiin haddii aad rabto inaad xisaab furto ama gasho taada, waa inaad si toos ah ugu samaysaa madal u gaar ah.
Galitaanka Twitch waa wax kiciya shakiga dadka isticmaala badan. Sababtaas awgeed, waxaan kuu sheegeynaa habka aan ku geli karno akoonkeena, iyo sidoo kale sida ay suurtogal u tahay in lagu abuuro koonto adeeggan ama habka aan ku soo ceshan karno furaha sirta ah haddii aan weyno.
Gal Twitch adigoon dhiman isku day Waa wax caqabad ku noqon kara xaalado badan, haddii aadan horay u adeegsan adeeggan. Taasi waa sababta aan u sharxeyno tillaabooyinka la raacayo iyo ikhtiyaarada kala duwan ee aan haysanno, si hawshani ay aad kuugu fududaato mar walba. Sidan ayaad awoodi doontaa inaad ku biirto beeshan weyn ee internetka oo aad ku raaxaysato cayaaraha ama baahinta tooska ah ee ciyaartooyda caanka ah ama faallooyinka.
1 Ka gal barta Twitch biraawsarka
2 Ku samee koonto Twitch biraawsar
3 Gal barnaamijka Twitch
4 Sida dib loogu helo gelitaanka koontadaada
5 Faa'iidooyinka is -qoritaanka Twitch
Ka gal barta Twitch biraawsarka
Midda ugu horreysa xulashooyinka waa inaan galnaa Twitch waa in laga sameeyo biraawsarkeena, wax suurtogal ka ah aalad kasta, sida kombuyuutarkeena. Kani waa ikhtiyaar aad u fudud si aad u gasho koontadayada, markaa waa inaysan soo bandhigin dhibaatooyin aad u badan inta badan. Tallaabooyinka ay tahay inaan raacno kiiskan waa:
Fur biraawsarka aad ku isticmaasho PC -gaaga.
Tag mareegaha Twitch (waxaad ka raadin kartaa mashiinka raadintaada) ama toos u gal www.twitch.tv.
Haddii mareegtu tahay Ingiriis, waxaad ku ridi kartaa Isbaanish xagga hoose ee shaashadda.
Guji ikhtiyaarka Saxeexa ee dhinaca midigta sare
Ku qor magacaaga isticmaalaha iyo furaha.
Haddii aad ka isticmaasho barxadda Facebook, guji ikhtiyaarka Ku xir Facebook -ga hoose.
Tallaabooyinkan ayaan awoodnay gal xisaabtayada Twitch si toos ah biraawsarka kombiyuutarkeena, wax ayaa sidoo kale suurtogal ka ah biraawsar kasta (Chrome, Edge, Firefox ...). Tani waa wax aan ku qaban karno taleefankeena, kiniiniga ama kombiyuutarka oo leh raaxo guud. Markaa wax dhibaato ah kuma qabtid inaad gasho.
Ku samee koonto Twitch biraawsar
Waxay u badan tahay inaad xiisaynayso inaad bilowdo adeegsiga Twitch oo aad rabto inaad ka gasho biraawsarka kombiyuutarkaaga. Haddii aadan waligaa soo gelin madalkan, weli ma lihid koonto, markaa waa inaad iska diiwaangelisaa. Waxaa sidoo kale naloo ogol yahay inaan ku xirno akoonkeena Facebook, laakiin qaar badan ayaa doorbidaya inay kala fogeeyaan labadan akoon, taas oo la fahmi karo. Si kastaba xaalku ha ahaadee, hannaanka sameynta koontada Twitch waxay la mid tahay gelitaanka, markaa wax dhibaato ah ma yeelan doontid.
Fur barowsarka kombiyuutarkaaga.
Tag bogga Twitch ama raadi shabakadda adiga oo adeegsanaya mashiinka wax raadinta.
Guji ikhtiyaarka Diiwaangelinta oo ku yaal midigta sare ee shaashadda mareegaha.
Geli magaca isticmaalaha aad rabto inaad isticmaasho.
Dhig eraygaaga sirta ah oo ku celi erayga sirta ah.
Geli taariikhda dhalashadaada iyo lambarka taleefanka ee xiriirka ama isticmaal cinwaanka iimaylka haddii aad doorbideyso.
Markaad dhammaystirto xogtan, guji badhanka diiwaanka ee hoose.
Tallaabooyinkan waxaad ka sameysay koonto Twitch barowsarka. Waad marin u heli kartaa waqti kasta, nooc kasta oo ka mid ah madalkan sidoo kale (haddii aad rabto inaad ku isticmaasho barnaamijka Android), maadaama kaliya ay tahay inaad isticmaasho magacaaga isticmaale iyo furahaaga mar kasta oo aad rabto inaad gasho Twitch, sidaa darteed tan waa wax si gaar ah u fududaan doona.
Gal barnaamijka Twitch
Isticmaalayaasha doonaya inay sidaas sameeyaan waxay ka geli karaan koontadooda Twitch biraawsarka, in kasta oo adeeggan uu sidoo kale leeyahay codsi u gaar ah. Waxa kale oo jira dhawr nooc oo codsigan la heli karo. Maaddaama aan soo dejisan karno nooca dalabka desktop -ka, oo aan ku rakibi karno kombiyuutarka, iyo sidoo kale codsigiisa taleefannada gacanta (laga heli karo Android iyo iOS). Markaa waxay kuxirantahay meesha aan rabno inaan galno madalkan, waxaan dooran karnaa nooca aan rabno inaan soo dejisanno.
Si aan ugu galno Twitch barnaamijka, waa inaan galnaa waxay marka hore ku sameeyeen koonto madal. Waxaa suurtogal ah in waxa ugu fudud ay tahay in lagu abuuro mareegahaaga, sidaan ku tusnay qaybta labaad. Sidan, marka aad soo dejiso nooca app -ka ee aad rabto inaad isticmaasho, waa inaad gelisaa oo keliya magaca adeegsadaha iyo erayga sirta sidaas darteedna waxaad awood u yeelan kartaa inaad si toos ah u gasho koontadaada. Habsocodkan ayaa loo fududeeyay habkan.
Haddii aan hore u soo dejisannay mid ka mid ah noocyada app -ka, markaa waa inaan sii wadnaa galitaankaas. Kani waa geedi socod aad u fudud, aadna ugu eg midka ay tahay inaan raacno nuqulka biraawsarka. Markaa qofna dhibaato kuma qabo gelitaanka barnaamijka Twitch, ha ahaato desktop, Android, ama app macruufka. Tallaabooyinka ay tahay inaan raacno si aan taas u awoodno waa:
Soo dejiso barnaamijka aad rabto inaad isticmaasho (nooca loogu talagalay PC, Android, Mac ama iOS).
Fur barnaamijka aaladdaada.
Guji ikhtiyaarka Galitaanka ee ka muuqda shaashadda.
Sug quudintaada shaashadda si ay u rarto.
Sida dib loogu helo gelitaanka koontadaada
Markaad gasho Twitch oo aad isku dayeyso inaad gasho, way dhici kartaa taas waxaan hilmaamnay furaheena galitaanka. Tani waa dhibaato la taaban karo, sababtoo ah waa wax aan suurtogal ahayn inaan u isticmaalno koontadayada adeeggan. In kasta oo sida koonto kasta oo ay lagama maarmaan tahay in la yeesho furaha sirta ah, had iyo jeer waxaa jira hab lagu soo ceshado gelitaanka koontadayada madal, si aan ugu adeegsan karno erayga cusub ee koontada. Tani waa wax aan samayn karno annaga oo raacna tallaabooyinkan:
Tag Twitch oo isku day inaad gasho (waxaa laga yaabaa inay ku habboon tahay barowsarka kombuyuutarkaaga) adiga oo gujinaya badhanka Galitaanka ee midigta sare.
Geli xogtaada (magaca isticmaalaha iyo erayga sirta).
Guji Dhibaato gelitaanka?
Daaqadda cusub ee soo baxda, geli cinwaanka emailkaaga ama lambarka taleefanka ee la xiriira koontadaada.
Sug si aad u hesho iimayl aad awoodi doonto inaad dib u furto eraygaaga sirta ah.
Guji xiriirinta ku jirta iimaylkaas.
Fadlan gali eray cusub.
Fadlan xaqiiji eraygan cusub.
Hadda waxaad mar kale geli kartaa Twitch.
Waxa caadiga ah ayaa ah markaan u dirno codsigaas inay dhibaato naga haysato galitaanka akoonkeena Twitch, madal email noogu soo dir dhowr daqiiqo gudahood. Iimaylkaas waxaan ku leenahay xiriir aan gujin karno si aan u beddelno furaha koontadayada oo aan gelinno mid cusub, kaas oo aan xusuusan doonno ama mid ka ammaan badan, haddii dhibaatadu ahayd in qof uu soo galay koontadayada oggolaansho la'aan . Markaad rabto inaad mar labaad gasho koontadaada nooc kasta oo ka mid ah codsiyada, waxaad ku adeegsan kartaa furahan sirta ah ee cusub oo aad sidaas ku gashid si caadi ah.
Faa'iidooyinka is -qoritaanka Twitch
Twitch wuxuu noqday mid ka mid ah aaladaha ugu caansan adduunka ee ciyaaraha qulqulka. Mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee ku jira ayaa ah inaan haysanno tiro wanaagsan oo durdurro caan ah, dadka sameeya baahinta tooska ah markay ciyaarayaan ama xitaa ka hadlayaan ciyaaraha. Markaa xaqiiqda ah inay jiraan magacyo waaweyn oo madasha ku yaal ayaa ah wax shaki la'aan ka caawiya isticmaaleyaal badan inay koonto ka furaan. Waxa kale oo jira qulqullo waaweyn oo afafka oo dhan ah, Ingiriisiga ilaa Isbaanishka, taas oo ah dhinac kale oo gacan ka geysata sumcadda adduunka oo dhan.
Twitch sidoo kale waa madal wanaagsan haddii aad qorshaynayso in aad tabiso waxyaabaha aad ka kooban tahay. Waxaa jira ikhtiyaarro badan oo la samayn karo sidoo kale waxaad leedahay beel weyn maanta, oo sii koraysa, sidaa darteed, tani waa wax si gaar ah u xiiso geliya dad badan. Jiritaanka qaabab kala duwan oo isdiiwaangelin ah, oo leh nooca lacagtiisa, ayaa dad badan u beddesho, maxaa yeelay waxay na siiyaan shaqooyin badan oo dheeri ah oo qiimo leh. Abuuraha nuxurka iyo isticmaalaha arki doona labadaba waxaa jira faa'iidooyin badan.
Qeybta wanaagsan ayaa ah haddii aad rabto inaad si toos ah u daawato baahinta tooska ah ama aad awood u yeelatid inaad si joogto ah ula socotid ciyaaraha, waxaad isticmaali kartaa Twitch adiga oo aan lacag bixin, wax si gaar ah ugu habboon. Madalku wuxuu leeyahay ikhtiyaarro loogu talagalay dhammaan noocyada adeegsadayaasha, sidaa darteed waxaad ka heli kartaa qaab kugu habboon, mid bilaash ah ama adigoo sharad ku gala rukhsad lacag -bixin ah oo ku siin doonta marinno hawlo dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Barnaamijyada » Si toos ah u gal Twitch